थाहा खबर: प्रहरी धरपकडमा रामचन्द्रको छातीमा चोट, भन्छन्– हिजोभन्दा आज दुख्यो
प्रहरी धरपकडमा रामचन्द्रको छातीमा चोट, भन्छन्– हिजोभन्दा आज दुख्यो
मंसिर १८, २०७७ बिहिबार
काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको छातीमा चोट लागेको छ। पुल उद्घाटन गर्न वरिष्ठ नेता पौडेल तनहुँ पुगेपछि संघीय बजेटमा बनेको पुल भन्दै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकर्ताले अवरोध गरेका थिए। कांग्रेस र नेकपाका कार्यकर्ताबीचको विवादले झडपको रुप लिने अवस्था भएपछि तनहुँ प्रशासनले निषेधाज्ञा नै जारी गरेको थियो।
तनहुँको बुल्दी खोला पुल उद्घाटन गर्न रामचन्द्र पौडेल फेरि जाने
​निषेधाज्ञाकै बीच पुल उद्घाटन गर्न हिँडेका पौडेललाई निषेधाज्ञा तोडेको भन्दै प्रहरीले बुधबार गिरफ्तार गरेको थियो। गिरफ्तारको क्रममा पौडेलको छातीमा चोट लागेको उनका स्वकीय सचिव चिरञ्जीवी अधिकारीले थाहाखबरलाई बताए। ‘छातीमा चोट लागेको छ। केही सुन्निएको पनि छ। रातो डाम बसेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘पाँच दिनलाई दुखाई कम गर्ने औषधि चिकित्सकले दिए। त्यो खाँदै हुनुहुन्छ।’ प्रहरी हिरासतबाट रिहा भएलगत्तै पौडेललाई उपचारका लागि दमौलीको रत्नहरि अस्पताल लगिएको थियो। पौडेललाई तीन घण्टा हिरासतमा राखेको थियो।
रामचन्द्र छुट्नुअघि ओलीलाई देउवाको फोन
​वरिष्ठ नेता पौडेलले पनि ट्वीटरमा लेखेर करङको दुखाइ बढेको बताएका छन्। ‘पुलिसको डण्डाबाट पेलिएका मेरा करङ दिउँसोभन्दा साँझ दुखेर आयो, हिजोभन्दा आज दुखाइ बढी छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘सात दशकको अथक प्रयासबाट प्राप्त गणतन्त्रमा पनि पुलिस पेलानबाट छुटकारा मिल्न सकेको छैन। असली लोकतन्त्र कहिले साकार हुने हो? मेरो चिन्ता यसैमा छ।’
पुलिसको डण्डाबाट पेलिएका मेरा करङ दिउसो भन्दा साझ दुखेर आयो, हिजो भन्दा आज दुखाइ बढी छ । सात दशकको अथक प्रयासबाट प्राप्त गणतन्त्रमा पनि पुलिस पेलानबाट छुटकारा मिल्न सकेको छैन ।
असली लोकतन्त्र कहिले साकार हुने हो ? मेरो चिन्ता यसैमा छ । pic.twitter.com/U2fxsHSr1z
— Ram Chandra Paudel (@NcPaudel) December 3, 2020
पार्टी प्यालेस सञ्‍चालकहरु टिक्नै नसक्ने र ऋण तिर्ने चिन्तामा
पीएम कपमा एपीएफको विजयी सुरुवात, अभिनाशको घातक बलिङ
‘प्रचण्ड-माधव समूह माउसुलीको चुडिएको पुच्छर हो, एकछिन छटपटिन्छ अनि सकिन्छ’
लोकतन्त्रवादीलाई जेल पठाउन बहस गर्ने वकिल ओलीका पक्षमा : भट्टराई
वैशाखमा चुनाव नभए ओलीलाई देशमा बस्‍नै नसक्ने धक्का दिन्छौँ : देउवा
सचिवालयमा सधैँ प्रचण्डको पावर र पदका विषयमा मात्र कुरा हुन्थ्यो : ईश्वर पोखरेल
कार्यकर्ता पक्राउको विरोधमा विप्लवले गरे देशव्यापी प्रदर्शन र नेपाल बन्दको घोषणा
संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको सुनुवाइ
केपी ओली अध्यक्ष होइन, पार्टी सदस्य हुनसमेत लायक रहेनन् : माधव नेपाल
लालबन्दीमा गगन थापाले भने : देशलाई अदालतले जोगाउँछ
पार्टीभित्रकै कपटपूर्ण तमासाले समस्या, तर देश बर्बाद पार्न दिन्‍नँ : केपी ओली
गायक जोसेफ शाहीको देउडा गीत ‘पियारी’ सार्वजनिक
थप २ सय ४० जनामा कोरोना पुष्टि, ४ सय ७७ मुक्त